Maalinta: Diseembar 29, 2019
Markii mashruuca Channel Istanbul uu si rasmi ah u bilaabay Raiisel Wasaaraha inta lagu jiray ololihii doorashada 2011; Xisaabahayga warbaahinta bulshada, waxaan rabay inaan farriin u diro jilayaasha siyaasadeed ee laga yaabo inay mawduuca ka soo baxaan. Waxaan idhi, Awood [More ...]
Waa inay ku xirnaataa Shabakada Tareenka Qaranka ee Bursa sida ugu dhaqsaha badan; Kemal Demirel, Gudoomiyaha Ururka Railway Lovers Association iyo xubin hore ee Barlamaanka Xisbiga Jamhuuriga kana soo jeeda Bursa muddadii 22-23, oo ay weheliyaan guddiga agaasimeyaasha Ururka [More ...]
Loogu talagalay oo soo saaray dalka Turkiga waxaa loo malaynayaa in Anadol ugu horeeyay ee gaari. Si kastaba ha noqotee, qaabeynta Anadol waxaa sameysay shirkada Reliant ee Ingriiska (Reliant FW5) wax soosaarkana waxaa lagu sameeyay shatiga laga helay Otosan. Anadol chassis, engine iyo [More ...]
Iskuxirka oo leh $ 688.5 milyan, oo ka kooban Shiinaha Shiinaha Merchants Expressway, CMU, Zhejiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway iyo Anhui Expressway, ayaa mas'uul ka ah dhismaha iyo hawlgalka Bridge Bridge Yavuz Sultan Selim. [More ...]
Mukhtaar La Doonaya Inuu Kocaeli Magaalo Weyn Ku Sameeyo
Mid ka mid ah laxiriira Degmooyinka Magaalada Kocaeli, GaadiidkaPark A.Ş. , Hatipköy Mukhtar Habibe Demiroğlu Aksoy safka 61 oo ku saabsan waqtiga dheeraadka ah kama uusan hadlin dalabka. Gaadiidka iyo Agaasinka waaxda Gaadiidka ee Waaxda Gaadiidka [More ...]
Maanta oo ah Taariikhda 29 Diseembar 1897 Qadka Isgoyska Dersaadet-Tẹsaloniya ayaa kaalin muhiim ah ka qaatay xamaasadda askarta iyo rasaasta intii lagu jiray Dagaalkii Cusmaani-Giriig. Anatolia iyo Shirkadda Dhismaha Waddooyinka Lacagta waxay ka heli doonaan dawladda 275.000 rodol rodol ah oo la gaarsiiyey. 29 Diseembar 1943 [More ...]